Kooxda Mogadishu City Club oo ku jirta diyaar-garowgii ugu dambeeyey ka hor kulankooda Gaadiidka… + SAWIRRO – Gool FM
(Muqdisho) 19 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Mogadishu City Club ayaa ku jirta diyaar-garowgii ugu dambeeyay ku jirta ka hor kulan ay la dheeli doonta naadiga Gaadiidka.
Naadiga Mogadishu City Club ayaa sanadkan ku jirta bandhig cajiib ah, iyadoo kulankii ugu dambeeyay ay guuldarro 3-2 kala soo kulantay wiilasha Raadsan.
Wiilasha Mogadishu City Club ayaa hadda ku jirta kala sarreynta horyaalka booska 4-aad iyadoo leh 14-dhibcood oo qura.
Mogadishu City Club waxaa dib ugu soo laabtay laacibkooda Feysal Hazard kaas oo muddo bil ah waddanka ka maqnaa shalay ayuu dib ugu soo laabtay dalka, isagoo saakay la qaatay tababarka buuxa ee kooxda.
Dhammaan xiddigahan kooxda ayaa soo wada xaadiray xerada tababarka ay ku sameynaysay kooxdan Mogadishu City Club iyagoo raba inay dib ugu soo laabtan wadada guulaha kaddib guuldarradii kooxda Raadsan.